Dhammaan wixii ku saabsan bisadda Bengali | Bisadaha Noti
Monica Sanchez | | Jinsiyadaha
Bisadda Bengal ama Bengali waa dhogor la yaab leh. Muuqaalkeedu waa mid aad u xusuusanaya shabeelka; Si kastaba ha noqotee, waa inaannaan ku kadsoomin muuqaalkiisa muuqaal ahaaneed, maadaama ay leedahay shakhsiyad bisad jilicsan oo qurux badan.
Waa nooc ugub ah, laakiin aad iyo aad bey caan u tahay. Waana taas, yaan rabin inuu shabeel yar ku haysto guriga? Aan wax badan ka baranno isaga.
1 Taariikhda bisadda Bengali
2 Sifooyinka jirka
2.1 Bisad cad oo bengal ah
3 Immisa sano ayuu bisad Bengal ama Bengaal noolaan karaa?
4 Dabeecaddu waa sidee
5 Sidee loo daryeelaa bisadda Bengal ama Bengali?
6 Immisa ayey le egtahay bisadda bengal?
Taariikhda bisadda Bengali
Bisadan quruxda badan soo ifbaxay iskutallaab u dhexeysa bisadaha guryaha iyo kuwa duurjoogta ah, tan iyo markii ay ku bilaabatay sidii isugeynta bisadda Abeeriya Aasiya (Prionailurus bengalensis) iyo noocyada kale ee bisadaha guryaha: Ocicat, Abtiiniyaan, British Shorthair iyo Masaarida Mau. Sidaas ayey suurtagal ku noqotay in la helo muuqaal duurjoog ah, laakiin leh dabeecad jacayl iyo kalgacal leh.
40-yadii waxaa horey u jiray bisadaha Bengal ee Jabbaan, laakiin isirku ma uusan horumarin ilaa 20-30 sano kadib, Mareykanka, halkaasoo markii ugu horeysay lagu soo bandhigay 1985. Waxay soo jiiteen dareen aad u badan oo ay dhawaan u aqoonsadeen inay yihiin nooc Ururka Bisadaha Caalamiga ah (ICA).
Iyada oo ay taasi jirto, waxaa jira ururo, sida CFA, oo aan u aqbalin inay yihiin asal ahaan maxaa yeelay ma aqbalaan iskudhafyada. Kaliya jiilka afraad ee Bengalis ayaa kaqeybqaadan kara barnaamijyadooda iyadoo ujeedadu tahay in hidde-wadaha duurjoogta ah la badhxo Laakiin runtu waxay tahay inay jiraan kuwa soosaara oo sii wadaya xulashada muunadaha oo ka talaabaya si ay u horumariyaan taranka; iyo xaqiiqda maanta looma baahna in laga gudbo bisadaha shabeelka oo leh bisadaha guryaha lagu dhaqo.
Bisad bengal sariirteeda
Bisadda Bengali Waa xayawaan weyn, culeyskiisuna yahay 9kg marka laga hadlayo ragga, iyo ilaa 4kg dheddigga. Jidhku waa mid aad u adag oo murqo leh, waxaana ilaaliya timo gaagaaban, jilicsan, qaro weyn leh. Madaxa waa waasac yahay, wareegsan yahay, indho cagaaran, dhago yaryar iyo dabo, dabo dhexdhexaad ah.
Marka loo eego heerka, waa qasab in la yeesho caarada madow, caloosha oo meerto iyo cagahaKoodhku waa bir kaliya, midabka salka ahna wuxuu noqon karaa kareem, dahab, oranji, fool-maroodi, jaalle ama caddaan.
Bisad cad oo bengal ah
Sawir - Amolife.com
Miyaad xusuusataa shabeellada albino wax badan, sax? Muuqaalkaas dabeecadeed ee muuqaalka ah, dabeecaddaas isku filnaanshaha ee uu qaatay intuu qorraxda qorayo ... Bisadda bengal ee cad waa xayawaan qurux waxaad dhaqso u noqon doontaa saaxiibka ugu fiican qoyska oo dhan. Dabcan, waa inaad ogaataa inaad tahay caddaan waa inaad iska ilaalisaa in aad ku sii dheeraato qorraxda qorraxda, maxaa yeelay haddii kale muddada dheer waxaad ku dhici kartaa kansarka maqaarka.
Immisa sano ayuu bisad Bengal ama Bengaal noolaan karaa?
Ilaa iyo inta aad ka helayso daryeel habboon, si fiican ayuu u noolaan karaa 9 iyo 15 sano. Dabcan, waa inuu ku noolaado guriga gudihiisa, maadaama haddii aan banaanka u dhigno, cimrigiisa nololeed waxay u badan tahay inuu yaraanayo.
Dabeecaddu waa sidee
Bisadda Bengali waa bisad aad u qaas ah. Isagu waa qof caqli badan, jacayl badan, aadna u firfircoon. Wuxuu jecel yahay inuu ciyaaro, sahmiyo, barto waxyaabo cusub, lana joogo qoyskiisa.. Intaas waxaa sii dheer, waa xayawaan ka mid ah kuwa sameeya xiriir adag oo lala yeesho qof keliya, in kasta oo ay timaado in la jeclaado dhammaan aadanaha guriga ku nool.
Wuxuu ku raaxeeyaa boodboodka, fuulitaanka iyo in kastoo ay ula muuqato wax lala yaabo, dabaasha, wax uu yaqaan sida loo sameeyo si aad u wanaagsan maadaama ay tahay tayo uu ka dhaxlay bisadda Aleeyaha Aasiya, oo ay tahay inay ugaarsato ugaarsadeeda.
Sidee loo daryeelaa bisadda Bengal ama Bengali?
Haddii aad go'aansato inaad la noolaato bisad Bengal ah waa inaad bixisaa daryeelka soo socda:
Markasta oo ay suurtagal tahay, waxaa si weyn loogu talinayaa in la siiyo cuntada dabiiciga ah, ama Yum Cunto loogu talagalay bisadaha, ama Barf (iyada oo la kaashanayo nafaqada nafaqada leh). Waa cuntada aad sida ugu fiican ugu dulqaadan karto isla markaana kuu keeni doonta faa'iidooyinka ugu badan, kuwa ugu waaweynna waa kuwa soo socda:
Ilko adag, caafimaad qaba oo nadiif ah
Koboca iyo horumarka ugu wanaagsan
Xaaladda ah inaad awoodi weydo inaad doorato nooca noocan ah, Beddelka ugu fiican ayaa ah in la siiyo quudin aan ku jirin badar ama wax soo saar, sida Applaws, Orijen, Dhadhanka Duurjoogta, iyo kuwa kale maxaa yeelay kuwani wax dhibaato ah kuuma keenayaan. Dabcan, waa inaad ogaataa in boorsada 7kg ay qaali tahay: si sahal ah ayey u noqon kartaa 40 euro, laakiin qadarka la bixinayo ayaa aad uga hooseeya haddii la siin lahaa quud jaban maxaa yeelay waxaa ku jira borotiin aad u tiro badan oo xayawaan ah.
Bisadda Bengali waa bisad si gaar ah u firfircoon. Waxay ubaahantahay in lagu ciyaaro maalin kasta, dhowr jeer. Saddex ama afar kalfadhi oo soconaya 10-15 daqiiqo ayaa qaab ahaan kuu sii hayn doona, waxaadna noqon doontaa mid deggan oo faraxsan.
Waxay sidoo kale noqon kartaa mid aad u xiiso badan in la baro inuu la socdo suunka. Haddii aadan aqoon sida loo sameeyo, ha ka welwelin. Daaran maqaalkan Waan kuu sharraxeynaa.
Timaha waa in lagu cadaydo hal mar maalintii kaar ama shanlo si meesha looga saaro dhogorta dhimatay. Looma baahna in la maydho. Inta lagu jiro xilliga molshada waxaa kugula talin doona inaad bixiso Malta si looga hortago in timo badani ku ururaan calooshaada.
Indhaha waa la nadiifin karaa 3-4 maalmood kasta iyadoo la isticmaalayo faashad nadiif ah (midba mid ka mid ah isha) oo lagu qooyay faleebo chamomile ah.
Dhegaha waa in lagu nadiifiyo faashad nadiif ah iyo dhibic isha ku timaada oo dhakhtarku qoro. Waa inaad kudartaa 1-2 dhibcood kuna nadiifi faashadda qaybta ugu dambeysa ee dheg kasta.
Sida bisadaha kale, inta lagu jiro sanadka koowaad ee nolosha waa lagama maarmaan in la geeyo dhakhtarka xoolaha si aad u saaray tallaalada lagama maarmaanka ah iyo qoyaan ama ku shahwo hadaadan damacsanayn inaad taranto.
Laga bilaabo sanadka iyo sanadkaba, waxaa si weyn lagugula talinayaa inaad dib uqaato si aad uhesho talaalada xoojiyaha ah oo aad u hubiso si loo ogaado dhibaatooyinka suurtagalka ah
Intaas waxaa sii dheer, mar kasta oo aad ka shakido inaad jiran tahay, waa inaad la tashataa takhasusle si uu kuu daaweeyo.
Immisa ayey le egtahay bisadda bengal?
Haddii aad runtii rabto inaad la noolaato mukulaal Bengali ah, oo aad u malaynayso inaad diyaar u tahay inaad bixiso dhammaan daryeelka ay u baahan tahay inta ay nool tahay, waa inaad ka fikirto in eey ku kacayso kudhowaad 1500 euro laga soo iibsaday meel ugaar.
Waan ognahay inaad jeceshahay, markaa aan ku soo afmeerno maqaalkan adoo ku lifaaqaya sawir sawir ah bisadda Bengali ama Bengal:
Wadada buuxda ee maqaalka: Bisadaha Noti » Jinsiyadaha » Bisadda Bengali, dhogorta leh muuqaal duur joog ah iyo qalbi aad u weyn
Maxay Bisaduhu Cun karin Shukulaatada?